Waa in la ogaadaa in technology 4K ayaa qaaday suuqa fudayd iyo qanacsanaanta si loo hubiyo in user helo ugu fiican iyo kan gobolka ee qaraarka farshaxanka. Waxaa jira tobanaan kun oo websites in curiyo user si loo hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah filimada farshaxanka iyo filimada waxa lagu siiyey in dadka isticmaala ee la xallinta HD iyo in ay dhacdo 4K HD waa wax ay tahay in la daradu. Tutorial waxaa loo qoray si ay u hubiyaan in user helo ugu fiican ilaa iyo aqoon taariikhda ku saabsan 4K iyo farsamooyinka la xidhiidha.
Top 5 goobood oo si aad u daawato 4K filimada iyo bandhigyada TV
Save Buck ah oo kaliya daawado free videos Sony
Waxaa gan naftaada
Qeybta 1: Top 5 goobood oo si aad u daawato 4K filimada iyo TV show
Ka dib waa 5 websites sare oo loo isticmaali karo si loo hubiyo in user helo gobolka ugu fiican iyo natiijada marka ay timaado 4K filimada iyo bandhigyada TV iyo sidoo kale waa in la ogaadaa in goob kasta oo kasta oo uu soo halkan ku xusan ayaa qiimaha la xiriira in ay kaas oo ay tahay in la tixgeliyo in arrintan la xiriira:
Laga soo bilaabo 4K filimada si ay muujinayso TV iyo walax kale this site ayaa ka mid ah kuwa ugu wanaagsan oo gobolka ka mid ah siyaabaha tahay si loo hubiyo in user helo guud ahaan heerka ku qanacsan in uu yahay ciyaaryahanka ugu fiican. Geeyo waxaa loo sameeyaa iyada oo aan arin kasta oo lagu eedeeyay ee arrintan la xiriira ayaa sidoo kale ku magacaaban in qofka macaamiisha ah si fudud u qaadi karaa xasilloon oo halkan waa mid ka mid ah goobaha ugu wanaagsan in lagu adeegga macaamiisha ee muddo aad u dheer hadda.
Netflix waxay bixisaa adeegyo ah ee heerka $12.99 bil kasta.
2. Amazon dagdag video
Amazon si xaqiiqo ah u baahan yahay ma sal-dhigida oo dhan. Iyada oo dukaanka ugu weyn online si loo daboolo baahiyaha iyo baahida macaamiisha hadda shirkaddu waa ka dib markii video ganacsiga 4K ah taas oo uu leeyahay heer la mid ah sida in dukaamada iyo waxyaabaha ay tahay in lagu halkaas ku bixiyeen. Tayada guud ahaan waa xaalad ka mid ah tahay oo halkan waa mid ka mid ah hababka ugu fiican in la sameeyo sida ugu fiican ee ka soo baxay deegaanka online iyo 4K filimada ee la bixiyo waxaa u fiican oo sabab la mid ah, waa mid ka mid ah siyaabaha ay u fiican uga soo saari deegaanka online arrintan la xiriira.
Xirmada ugu yar waa $19.99 iyo heerka kor u kaco sida ka badan videos la iibsan karo.
Sidoo kale waa mid ka mid ah goobaha in ay ahayd mid ka mid ah jiga ee la soo dhaafay dadka isticmaala ee doonaya in ay u hubiyaan in ugu fiican iyo kan gobolka ee arrimaha tahay waxaa lala macaamilaa iyo guud 4K filimada waxaa la bixiyaa fudayd iyo qanacsanaanta dadka isticmaala ee . Users ayaa daawan kartaa 4K filimada iyo bandhigyada TV laakiin sidoo kale hubin karaa in in ugu fiican iyo gobolka barnaamijyada farshaxanka waxaa lagu qabtaa sida in ay la aqbalsan yahay karaa oo gacanta ku sida ugu dhakhsaha badan user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah gacanta ku tahay arrintan la xiriira. Guud ahaan qaabka ugu fiican iyo navigation sidoo kale waa ay fududahay in la raaco:
Kacaysaa videos ayaa $ 9.99 in la kiraysto.
Hadda YouTube waa mid ka mid ah goobaha ugu badan ee soo booqday dhulka iyo warka wanaagsan waa in goobta ay sidoo kale taageertaa 4K filimada aan arin kasta oo heerka qanacsanaantaada guud ee macmiilka waa kan ugu fiican. Waxa kaliya ee loo baahan yahay wax xidhiidh ah oo wanaagsan si aad u hesho internet videos ka huleeshay tayo iyo fasalka. Waxaa sidoo kale in la xuso in user u baahan yahay si loo hubiyo in ugu fiican iyo gobolka of videos tahay waxa kaliya ee browsed. Qaraarka sare u sii ahaan lahayd waayo aragnimo u fiirinaya guud ee arrintan la xiriira.
Waa lacag la'aan ah iyo mar kasta ahaan dooni. Sida ku xusan oo dhan ka hor waxa loo baahan yahay wax xidhiidh ah oo wanaagsan internet si ay u taageeraan 4K videos.
Comcast ahaa oo horay loogu haystaa Comcast iyo hadda this site ayaa ka mid ah kuwa aan suuqa loo qaaday si buuxda iyo dadka isticmaala ay sidoo kale aad ugu faraxsan yahay in arrintan la xiriira sida ugu fiican views online waxaa lagu bixiyaa lacag la'aan ah oo ka kooban 4K ah waxaa lagu daaweeyaa iyada oo qayb ka mid ah si joogto ah Comcast Times. Sidoo kale waa in la ogaadaa in sidan farsamo adeegga waa lacag la'aan.
Siiyaa lacag la'aan ah oo qayb ka ah Times joogto ah Comcast
Qeybta 2: badbaadi Buck ah oo kaliya daawado free videos Sony
Geedi socodka waa mid aad u fudud in la raaco iyo sabab la mid ah, waa mid ka mid ah siyaabaha si loo hubiyo in user helo aragtida ugu fiican marka ay timaado Sony videos. Hagaha tilmaamay in qaybtan waa in la raaco si aad u hesho aragtida ugu fiican iyo natiijada guud ee wanaagsan:
1. URL ayaa http://www.crackle.com/ waa in ay soo booqdaan. Waa mid ka mid ah goobaha uu soo dhexgeliyey goobaha Sony TV iyo Movies iyo bixisaa ka kooban oo lacag la'aan ah:
2. Muddo raadinta qataara user ay u baahan tahay in ay galaan macluumaadka la xiriira in ay ku talaabsato dheeraad ah ee arrintan la xiriira:
3. Marka natiijada curiyo user la hubiyo in baadhay fudayd iyo qanacsanaanta iyo user helo natiijada ugu wanaagsan samayn kartaa. Movie The la riixi karaan si ay u ciyaaraan iyo waa lacag la'aan:
Qeybta 3: waxaa gan naftaada
Xabado 4K filimada ma adag tahay oo dhan, sida user Khasab ma aha in fuudh yeesho giraangirta arrintan la xiriira. Waxa loo baahan yahay oo kaliya waa camera ah oo tayo sare leh oo uu qofka ku xirfad ku filan inkastoo xirfad heer sare ah oo aan loo baahnayn oo dhan.
1. goobaha ee telefoonka user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in Photos & Kaameerada waxaa la heli iyo user helo geeddi-socodka bilaabay gudahood:
2. video doorasho record markaas waa in la soo xulay si ay u hubiyaan in baxa user arrintan la xiriira ee:
3. 4K ee 30 FPS markaas waa in la soo xulay si ay u qoraan video iyo in la hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan ee arrintan la xiriira iyo tan ayaa sidoo kale ka baxayo geedi socodka ee buuxa:
> Resource > Video > 7 siyaabo si uu u daawado 4K filimada iyo bandhigyada TV